'भिटामीन सी'को कमी भएमा के-के हुन्छ ? यस्ता छन् फाइदा 'भिटामीन सी'को कमी भएमा के-के हुन्छ ? यस्ता छन् फाइदा Canada Nepal
'भिटामीन सी'को कमी भएमा के-के हुन्छ ? यस्ता छन् फाइदा
क्यानाडा नेपाल पौष १३ २०७८
काठमाडौं - हाम्रो स्वास्थ्यको लागि भिटामिन सी निकै आवश्यक पर्दछ । शरिरमा भिटामिन सीको कमी भएमा बिभिन्न समस्याहरु देखा पर्ने गर्छन् । यदि हामिले शरीरलाई बलियो बनाउन र रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता बढाउनु छ भने भिटामिन सी हुने खानेकुराहरु खानुपर्दछ ।
हाम्रो दैनिक खाने खानेकुराहरुमा भिटामिन सी पाइन्छ । तर हामिलाई कुन खानेकुरामा कुन भिटामिन पाइन्छ भन्ने बारे थाहाँ हुँदैन । अहिले हामिले कोरोना पनि भोगिरहेका छौं ।
यस समय भिटामिन सी भएका खानेकुरामा बढी जोड दिएमा कोरोनाबाट पनि हामि बच्न सकिन्छ । भिटामीन सी सुन्तला, अमला, कागती, किवी, ब्रोकाउली, भेडे खुर्सानी लगायतका खानेकुरामा पाइन्छ ।
भिटामीन सीको कमी भएमा के-के हुन्छ ?
- भिटामीन सीको कमी भएमा घाउ छिट्टै निको नहुने हुन्छ । यदि चोटपटक लागेर रगत बगेको छ भने भिटामीन सी आवश्यक पर्छ ।
- भिटामीन सीको कमी भएमा नाक तथा गिजाबाट रगत आउने समस्या पनि देखा पर्ने गर्छ । गिजाका बिरामीलाई भिटामीन सीको सेवन गर्नु राम्रो हुन्छ ।
- भिटामीन सी कमी भएमा मोटोपना बढ्ने गर्छ । भिटामीन सी कमी भएमा शरिरको बोसो बढ्ने गर्छ । जसले गर्दा मोटोपन बढ्ने गर्छ ।
- भिटामीन सीको कमी भएमा आँखामा पनि असर पर्ने पर्छ । भिटामीन सी तथा एन्टी अक्सिटेन्टको कमी भएमा आँखामा समस्या हुनसक्छ ।
छाला भिटामिन सीले हाम्रो छालाका विभिन्न समस्या समाधान गर्नुको साथै छाला सम्बन्धि रोगहरुबाट पनि बचाउन सहयोग गर्छ । यसले छालाका कोशिकाहरू मर्मत गर्न, छालालाई धुलो र खराव हावाहरु बाट जोगाउन सहयोग गर्छ । साथै छालामा हुने खैरो दाग र एक्ने आउने कम गर्छ । यस्तै छालाको टोन बाहिर निकाल्न र कोलाजेन उत्पादनलाई उत्तेजित गर्न पनि सहयोग गर्छ ।
पौष १३, २०७८ मंगलवार २१:०६:२६ बजे : प्रकाशित
# भिटामीन सी